ဘေဘီလေးတွေမှာလည်း ကိုဗစ် ဖြစ်နိုင်လား………. - Hello Sayarwon
ကိုဗစ်က လူကြီးတွေမှာပဲ ဖြစ်တာလား…… ကလေးလေးတွေမှာရော မဖြစ်ဘူးလား…..ဆိုပြီး တွေးမိနေလား…….. တကယ်ကတော့ ကိုဗစ်က ကလေးတွေမှာရော လူကြီးတွေမှာပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုကွာနေတာက ကလေးတွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ လူကြီးတွေလိုမျိုး မပြင်းထန်တာပါ။ တစ်ခါတလေမှာ လုံးဝ လက္ခဏာ မပြတာမျိုးလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးတွေမှာ ကိုဗစ်က မဖြစ်တာလား………….
ကလေးတွေမှာလည်း ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘေဘီလေးတွေမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ လူကြီးတွေလို ဖျားနာတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ကလေးအများစုမှာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်က မပြင်းထန်တာမျိုး ရှိနိုင်သလို လက္ခဏာ လုံးဝမပြတာမျိုးလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
American Academy of Pediatrics and the Children’s Hospital Association ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရကတော့ အသက် ၁၀ နှစ်နဲ့ ၁၄ နှစ်အောက် ကလေးလေးတွေမှာ အသက် ၂၀ အထက်သူတွေထက် ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ တော်တော်လေး နည်းနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီလိုဆိုတာနဲ့ ကလေးတွေမှာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်လည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် မခံစားရဘူးလို့ တထစ်ချ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးစင်တာ (CDC) ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကိုဗစ်ကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖျားနာတဲ့ ဘေဘီလေး တွေ ရှိသလို ကိုဗစ်ကြောင့် အထူးကြပ်မတ် ကုသမှု ခံယူနေရတဲ့ ကလေးတွေရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
တကယ်လို့ ကလေးတွေမှာ အဝလွန်တာ၊ ဆီးချို၊ ပန်းနာရင်ကြပ်လိုမျိုး ရောဂါအခံတွေ ခံစားနေရမယ်ဆိုရင် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတာကြောင့် ရောဂါလက္ခဏာ ပြင်းထန်နိုင်ခြေ များပါတယ်။ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါ နဲ့ အခြားသော မွေးရာပါ ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ ကလေးတွေမှာလည်း COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတာကြောင့် ရောဂါလက္ခဏာ ပြင်းထန်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
ကလေးတွေမှာက ကိုဗစ်ကြောင့် ရောဂါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရနိုင်ခြေ နည်းတယ်ဆိုပေမယ့် လုံးဝ မဖြစ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုဗစ်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက ကလေးနဲ့လူကြီး ဘာကြောင့် မတူတာလဲ……….
ဒီအဖြေကို အခုထိလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတာကတော့ ကလေးတွေမှာ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ သာမန်ဖျားနာမှုလိုပဲ လက္ခဏာ ပြသပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်ကလည်း ကိုဗစ်ကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေး နဲ့ လူကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ် တုံ့ပြန်ပုံချင်း ကွာခြားနေတာကလည်း ကလေးတွေမှာ ကိုဗစ်လက္ခဏာ မပြင်းထန်ရခြင်းရဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။ ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်ရောက်တဲ့အခါ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေရဲ့ ကိုယ်ခံအားက အလွန်အကျွံ တုံ့ပြန်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထိခိုက်မှုတွေက ပိုများတာပါ။ ကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ခံအားက လူကြီးတွေလို အပြည့်အဝ မဖွံ့ဖြိုးသေးတာရယ် ဗိုင်းရပ်စ်ကို အလွန်အကျွံ မတုံ့ပြန်တာရယ်ကြောင့် ကလေးတွေမှာ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ လူကြီးတွေလို မပြင်းထန်တာပါ။
ကိုဗစ်ကြောင့် ဘေဘီလေးတွေမှာ ဘယ်လို ထိခိုက်နိုင်လဲ…………
အသက် ၁ နှစ်အောက် ဘေဘီလေးတွေမှာ ကိုဗစ်ကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖျားနာနိုင်ခြေက အခြား အသက်အရွယ် ကလေးတွေထက် ပိုများပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူတို့လေးတွေမှာ ကိုယ်ခံအားက အပြည့်အဝ မဖွံ့ဖြိုးသေးတာရယ် သူတို့ရဲ့ လေပြွန်လေးတွေက သေးငယ်လွန်းတာရယ်ကြောင့်ပါ။
အသက် ၁ နှစ်အောက် ကလေးလေးတွေက အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေနဲ့ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တာကို အခြားအရွယ်တွေထက် ပိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက်ရော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ရှိလား…………..
Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို အသက် ၁၂ နှစ်နေစပြီး ထိုးနှံလို့ ရပါပြီ။ ဒီကာကွယ်ဆေးက ၂၁ ရက်ခြားပြီး ၂ ကြိမ် ထိုးရမှာပါ။
Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို အသက် ၁၂ နှစ်ကနေ ၁၅ နှစ်အရွယ် ကလေးတွေကို ကိုဗစ် အန္တရာယ်ကနေ ရာနှုန်းပြည့် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ၁၆ နှစ်နဲ့ အထက် ကလေးတွေမှာတော့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ သုတေသန ရလဒ်တွေအရ သိရပါတယ်။
ဘေဘီလေးတွေမှာ ပြတဲ့ ကိုဗစ်လက္ခဏာ
ဘေဘီလေးတွေနဲ့ လူကြီးတွေမှာ ပြတဲ့ ကိုဗစ် လက္ခဏာချင်းကတော့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ကလေးတွေမှာတော့ သိပ်မပြင်းထန်ဘဲ သာမန်ဖျားနာမှုလိုပဲ လက္ခဏာ ပြတတ်ပါတယ်။ ကလေးအများစုက ရက်သတ္တပတ် ၁ ပတ်ကနေ ၂ ပတ်လောက်မှာ ပြန်လည် သက်သာလာတတ်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးတွေမှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိုဗစ်လက္ခဏာတွေကတော့
အသက်ရှူတာ ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်း ဖြစ်မယ်
ဗိုက်နာမယ် စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကလေးမှာ အခုလို လက္ခဏာတွေ ခံစားနေရမယ်ဆိုရင် ကလေးကို သီးသန့် ခွဲထားဖို့ လိုမှာ ဖြစ်သလို ရေချိုးခန်း ရေအိမ်စတာတွေကိုလည်း သီးသန့် အသုံးပြုစေဖို့ လိုပါမယ်။ ကလေးကို ရေဓာတ်ပြည့်အောင် ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုသလို လိုအပ်တဲ့ ကုသမှု ခံယူစေဖို့လည်း လိုပါမယ်။
ဘေဘီလေးတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) ဆိုတာ ဘာလဲ……….
ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တဲ့ Multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) ဆိုတာ ဘေဘီလေးတို့ရဲ့ နှလုံး၊ အဆုတ်၊ သွေးကြောတွေ၊ ကျောက်ကပ်၊ အစာခြေစနစ်၊ ဦးနှောက်၊ အရေပြား နဲ့ မျက်လုံးလိုမျိုး ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့ ရောင်ရမ်းမှုတွေ ဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေပါ။
ဘေဘီလေးတွေမှာ MIS-C ခံစားရတဲ့အခါ
အဖျားက တစ်ရက်နဲ့ အထက်ဖြစ်နေမယ်
အရေပြားမှာ အင်ပြင်လိုတွေ ဖြစ်မယ်
လျှာနဲ့နှုတ်ခမ်းတွေ နီရဲမယ်၊ ရောင်ရမ်းမယ်
လက်ဖဝါး၊ ခြေဖဝါးတွေ နီရဲမယ်၊ ရောင်ရမ်းမယ်
ပြန်ရည်ကျိတ်တွေ ရောင်မယ် စတဲ့လက္ခဏာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကလေးက တစ်ချိန်လုံး ခွေနေမယ်
အရေပြား၊ နှုတ်ခမ်း၊ လက်သည်းခွံတွေ အရောင်ဖျော့တော့မယ်၊ မီးခိုးရောင် သမ်းမယ်၊ ပြာနှမ်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ အရေးပေါ် ကုသမှု ခံယူဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
ဘေဘီလေးကို COVID-19 ကနေ ဘယ်လို ကာကွယ်ပေးမလဲ………
ဘေဘီလေးတွေကို ကိုဗစ်အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုရင်
လက်တွေကို သေချာဆေးကြောပြီးမှ ဘေဘီလေးကို ကိုင်တွယ်ပါ
ဘေဘီလေးကို လူစုလူဝေးဖြစ်မယ့် နေရာတွေကနေ ရှောင်ကြဉ်နေစေပါ
ဘေဘီလေးရဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို ပိုးသတ်ပါ
ဘေဘီလေးက အသက် ၂ နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင် အဝတ် ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ပေးပါ။
COVID-19 (coronavirus) in babies and children https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-in-babies-and-children/art-20484405 Accessed Date4August 2021
Coronavirus (COVID-19) symptoms in children https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/ Accessed Date4August 2021